Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Eye Drops for Glaucoma မျက်စိရေတိမ်အတွက် မျက်စဉ်းများ
Sun, Dec 2, 2012 at 10:18 AM
ဆရာ့ကို နိုဝင်ဘာ (၂၄) ရက်နေ့က တစ်ခါမေးဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့ကို ရေတိမ်ရောဂါ ဖြစ်နေတာ ၉၀% ကျိန်းသေနေပြီလို့ ပြောပါတယ်၊ ကျွန်တော့မျက်စိကတော့ ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး IOP က 17mmHg ရှိပါတယ်။ ဆရာမကတော့ OCT အဖြေကို ကြည့်ပြီး အခု Timolol အမျိုးအစားထဲက မျက်စဉ်း ပေးထားပြီး တစ်လကြာမှ ပြန်လာပြရန် ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က Timolol မျက်စဉ်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကိုကြောက်လို့ တစ်ခြား အမျိုးအစားကို ပြောင်းပြီး သုံးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးပါဦး။ မျက်စဉ်းကရော သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်လောက် ဆက်ပြီးသုံးရတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
Glaucoma ရေတိမ်အတွက် မျက်စဉ်းတွေကို မျက်စိအခြေအနေအလိုက် ရွေးသုံးရမယ်။ ရေတိမ်အတွက်မျက်စဉ်းဟာ မျက်စိ ရှေ့ခန်းထဲမှာ Aqueous humor အရည်တွေ မထွက်နိုင်ဘဲပိတ်နေလို့ Intra-ocular pressure မျက်စိဖိအား များနေတာကို သက်သာစေဘို့ ဖြစ်တယ်။ Drainage ထွက်လမ်းသာစေဘို့ဖြစ်တယ်။ ဒါမှသာ Optic nerve မျက်စိအာရုံကြော ပျက်စီးမှာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။
Timolol eye drops ရေတိမ်အတွက်သုံးစွဲရတဲ့ မျက်စဉ်းဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာ ရောင်းတယ်။ သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါအတွက် သောက်ဆေးလဲ ရှိတယ်။ Beta blockers ဆေးဖြစ်ပြီး အရည်ထုတ်လုပ်တာနည်းစေမယ်။
• မျက်စိဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခပ်ခပ်ခြင်း ပူလောင်တာခံစားရနိုင်တယ်။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
• အမြင်အတွက် ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခပ်ခပ်ခြင်း မျက်စိဝေဝါးမယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမယ်။
• တခြား ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ = ထူးခြားဆိုးဝါးတာမရှိပါ။ စိတ်မူအပြောင်းအလဲ တချို့မှာရှိနိုင်တယ်။ စိတ်ကျတာမျိုး၊ ခေါင်းမူး၊ အိပ်ချင်၊ နှလုံးခန်မမှန်၊ အသက်ရှူခက်။ ဒါတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ပြန်ပြောပါ။ ပန်းနာ ရှိနေသူ၊ ဆီးချိုးရှိနေသူ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ (အလာဂျီ) ရှိသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူတွေ သတိနဲ့သာ သုံးရမယ်။ Reserpine, Calcium channel blockers, Epinephrine, Clonidine, beta-blockers နဲ့ Quinidine ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါ။
ရေတိမ်မျက်စဉ်းတွေနဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
1. Alpha agonists မျက်စဉ်း။ အရည်ထွက်တာလဲနည်းစေပြီး ထွက်မျာကိုလဲအားပေးတယ်။ Alphagan P နဲ့ iopidine တွေ ဖြစ်တယ်။ (အလာဂျီ) ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ နှာခေါင်းခြောက်နိုင်တယ်။
2. Alpha-adrenergic agonists မျက်စိနီရဲစေမယ်။ သူငယ်အိမ်ကျယ်စေမယ်။ ယားမယ်။ Iopidine (Alcon), Alphagan (Allergan) နဲ့ Alphagan-P (Allergan) တွေဖြစ်တယ်။
3. Beta-blockers တွေကို အရင်ဆုံးသုံးခဲ့ကြတယ်။ ဒီမျက်စဉ်းမျိုကြောင့် နှလုံးခုန်နှေးစေမယ်။ အသက်ရှူ တိုနိုင်တယ်။ သွေးဖိအားကျမယ်။ လိင်စိတ်နည်းနိုင်တယ်။ စိတ်ကျနိုင်တယ်။ Prostaglandins နဲ့လဲ တွဲသုံးနိုင်တယ်။ Timoptic XE (Merck), Istalol (ISTA) and Betoptic S (Alcon) တွေဖြစ်တယ်။
4. Carbonic anhydrase inhibitors မျက်စဉ်းကနေ မျက်စိအနေရခက်နိုင်တယ်။ ပူလောင်မယ်။ များသောအားဖြင့် တွဲသုံးတယ်။ သောက်ဆေးလဲရှိတယ်။ ပူလောင်တာခံစားရမယ်။ အရသာခါးမယ်။ မျက်စိနီမယ်။ Trusopt (Merck) and Azopt (Alcon) မျက်စဉ်းနဲ့ သောက်ဆေးအဖြစ် Carbonic anhydrase inhibitors (CAI) are Diamox (Sigma), Neptazane (Wyeth-Ayerst) and Daranide (Merck, Sharp, & Dohme) တွေရှိတယ်။ လူနာတဝက်လောက်က ဆေးကိုမခံနိုင်ဘူး။ အားယုတ်တာ၊ စိတ်ကျတာ၊ အစာမစားချင်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ၊ လိင်စိတ်နည်းတာ၊ ခြေဖျားလက်ဖျား ထုံကျင်တာ နဲ့ သတ္တုအရသာ ဖြစ်နေတာတွေကို မခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အရည်ထွက်တာနည်းစေတယ်။
5. Epinephrine ဆေးကတော့ အရည်ထုတ်လုပ်တာနှေးစေမယ်။ ထုတ်ပြစ်တာမြန်စေမယ်။ မျက်ခွံလွှာ အရောင် ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ မျက်ရည်လမ်းပိတ်မယ်။ ရင်တုံမယ်။ Epinephrine နဲ့ Allergan's Propine (Dipivalyl epinephrine) တွေဖြစ်တယ်။
6. Glycerin သောက်ဆေး။ Isosorbide သောက်ဆေး နဲ့ Mannitol နဲ့ Urea သွေးကြောထဲထိုးဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
7. Hyperosmotic agents ဆေးကို ဖိအားသိပ်များနေသူတွေအတွက်ပေးတယ်။ တခါတည်းသာ သုံးလေ့ရှိတယ်။
8. Parasympathomimetics ဆေးက အရည်ထွက်ပိုစေမယ်။ Narrow-angle glaucoma ဒေါင့်ကျဉ်းရေတိမ် အတွက် သုံးတယ်။ သူငယ်အိမ်ကျဉ်းစေတယ်။ မျက်ခုံးကိုနိုင်တယ်။ ပူလောင်မယ်။ ညပိုင်းမှာ မျက်စိ ကြည့်မကောင်းဘူး။ Pilocarpine, Carbachol, Echothiophate နဲ့ Demecarium တွေဖြစ်တယ်။
9. Prostaglandin analogs မျက်စဉ်းကနေ မျက်လုံး (သူငယ်အိမ်ကြွက်သား) ကို အရောင်ပြောင်းစေနိုင်တယ်။ အမြင်ဝေဝါးစေနိုင်တယ်။ မျက်စိနီရဲနိုင်တယ်။ ပူလောင်တာခံစားရနိုင်တယ်။ ယားနိုင်တယ်။ မျက်တောင်တွေ ပိုရှည်ပြီး ကောက်လာစေနိုင်တယ်။ Prostaglandins မျက်စဉ်းကို အများသုံးတယ်။ တနေ့မှာ တခါသာခပ်ရလို့ လူကြိုက်များတာလဲပါတယ်။ မျက်စိထဲကကြွက်သားတွေကို ပြေလျှော့စေလို့ အရည်ပိုထွက်စေတယ်။ Xalatan (Pfizer), Lumigan (Allergan), Travatan Z (Alcon) နဲ့ Rescula (Novartis) တွေဖြစ်တယ်။ အရည်တွေ ထွက်ဘို့ အားပေးမယ်။
တချို့လူနာတွေက ဆေး တမျိုးမက လိုနိုင်တယ်။ Cosopt ဆေးထဲမှာ ဆေးတမျိုးမက ရောထားတယ်။ စမ်းသပ်သုံးနေတဲ့ ဆေးကုသနည်းတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ Namenda (Memantine), Copaxone (Glatiramer acetate), Gingko biloba နဲ့ Nanoparticles ဆေးတွေဖြစ်တယ်။
• Glaucoma မျက်စိ ရေတိမ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/07/glaucoma.html
Posted by Dr. Tint Swe at 8:51 PM